SomaliaReport: Xagee Sheekh Aweys Ka Dhacay?
Labadii habeen ee lasoo dhaafay, waxaa laysla dhexmarayey in Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ka mid ah aasaasayaashii Ururka Maxkamadaha Islaamiga (UMI) isla markaana hogaamiyaasha sare ee al-Shabaab, in ay xireen saraakiisha al-Shabaab lagana soo qaaday gurigiisa ku yaal Ceelasha Biyaha loona dhaadhiciyey magaala dekadeedka Marka.
Waxaa la mala awaalayaa in Axmed Godane oo ah hogaamiye al-Shabaab ah oo xagjire caalamiya uu xiray Sheekh Aweys oo ka shakiyey in Axmed Godane ka danbeeyey dilkii hogaamiyaha Al-Qaacida Bilaal al-Barjawi ee Janaayo 21.
Warkan waxaa soo tabiyey Raadyo Muqdisho habeenimadii Isniinta, hay’ad warbaahin oo si ba’an ugu janjeerta Dawlada Ku Meel Gaarka (DKMG) iyo Raadyaha Risaala. Labada saldhigba waxay sheegeen in warkooda ku salaysan yihiin warar aan lahubin markii suxufi Somalia Report uu wacay si uu uxaqiijiyo sheegashadooda.
Xiritaanka Aweys waxaa beeniyey Sheekh Aweys qoyskiisa iyo saraakiil al-Shabaab ah oo Somalia Report la xiriirtay.
Somalia Report waxay kaloo la xiriirtay kooxaha Sheekh Mukhtaar Roobow oo ah hogaamiye sare ee al-Shabaab isla markaana ay Sheekh Aweys isku xulafo yihiin, laakiinse wardoonkayaga waa lala cajabey iyadoo loo arday mid aqoon daro ah.
Markii aan la xiriirnay xooghaynta Sheekh Aweys, wuxuu si degdeg ah ugu jawaabay laguna taliyey inaan so toos ah la xiriirno afhayeenka al-Shabaab Sheekh Cali Dheere. Telefoonka Cali Dheere lagama jaawaabin.
Somalia Report waxay raadraaci doontaa wixii warar ah ee soo kordha.
Khilaafka udhexeeya xufnaha Roobow/Aweys iyo Godane wuxuu sii kordhay markii xukunka Godane qarax la eegtay bishii Octoobar 4-teedii arday saf ugu jirtay inay helaan deeqaha waxbarashada Turkiga.